Iskuxiraha Laanta Cadceeda ee Shiinaha MC4 T Warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha Isbarbar dhiga Solar | RISIN
Isku xiraha laanta 'Triple MC4 T' (1 Set = 3Male 1Female + 3Female 1Male) waa labo kamid ah isku xirayaasha fiilada ee loo yaqaan 'MC4' oo loogu talagay qolalka qoraxda. Isku xirayaasha laanta 3T waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa isku xirka 3 fiilooyinka qoraxda sidoo kale xiriir isku mid ah, oo ku habboon MC4 Dheddig lab ah isku xira laga bilaabo Module PV. 3in 1out isku xiraha laanta ayaa kufilan kara dhamaan MC4 Nooca Photonic Universe qoraalada qorraxda.Waa 100% biyo la'aan (IP67), sidaa darteed waxaa loogu isticmaali karaa banaanka xaalad kastoo cimilo ah.
Sharaxaadda 3 ee 1 isku xira Laanta MC4 T
Isku xirayaasha Laanta MC4 waxaa loo adeegsadaa fiilooyinka qorraxda ee isku dhejisan (modules PV). Waxaa loo iibiyay lammaane, kuwan "Y-Connectors" waxay ilaalin doonaan danabyada qaabeynta qaybta qorraxda si ay ula jaan qaadaan cabbirka baatariga. Kuwani isku xirayaasha qoraxda ee 1to3 waxay si buuxda ula jaan qaadi karaan isku xirayaasha MC4 waxayna la yimaadeen hal lab (MMMF) iyo hal dheddig (FFFM). U isticmaal kuwan Xidhiidhiyeyaasha Laanta MC4 si aad u sameysid xiriiro isku dhafan oo aan biyuhu xirnayn
Faa'iidada isku xira Laanta MC4 1to3 PV
Sawiridda MC4 3to1 T Splitter
Hore: MC4 T isku xira Fiilooyinka Solar Panel 2to1 oo taxane ah
Xiga: Solar Panel Cable Splitter 1 illaa 4 T Xidhiidhiyeyaasha Laanta
3in1 pv laan
3T isku xira qoraxda
3to1 laan mc4
3to1 isku xira guddi qoraxda
3Y ku dheji qorraxda
3Y splitter qoraxda